လိုဂိုဒီဇိုင်း, ထုပ်ပိုး, တံဆိပ်ကပ်ခြင်း
ကောက်ပဲသီးနှံ Group မှအသိပညာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်သုံးလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများသည်တို့ပါဝင်သည်။ ထိုအအထူးပြုအတွေ့အကြုံကို။ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီကြိုတင် Agro Co. , Ltd ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တစ်သီးနှံမှတ်ပုံတင်နှောင်းပိုင်းတွင် 2543 ခုနှစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ Kasetsart တက္ကသိုလ်, Kamphaeng Saen ခရိုင်, Nakhon Pathom ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးများ၏နယ်ပယ်ထဲမှာတစ်ဦးဆွေမျိုးမျက်နှာသစ်အဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ် အာဟာရပြည့်ဖြည့်စွက်အုပ်စုတစ်စု သီးနှံ input ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် agrochemical ကုမ္ပဏီများနှင့်။
နှင့် 2548 ခုနှစ်, ငါတို့ဝယ်လိုအားတိုးမြှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့န့်အသတ်အရည်သတင်းလွှာ Sierra Agri တည်စေပြီ။ န်ဆောင်မှုများရောင်းအား အဆိုပါ relay ကို နယူးအသိပညာ အဆိုပါစက်ရုံအာဟာရ အဖြစ်ကောင်းစွာသုတေသနပြုအဖြစ် သိပ္ပံ၏ဌာနမှာသုတေသီများ။ တက္ကသိုလ် ကျနော်တို့ကဓာတ်ခွဲခန်းများ အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကျွန်မအံ့ စီးပွားရေးနှလုံး Enhancer ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဖြစ်ကောင်းစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ် ထိရောက်သော ခေါင်းဆောင်မှုပေး အာဟာရပြည့်အတွက် supplementation သီးနှံစာသားနှင့် 2548 ခုနှစ်, ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာသုတေသနနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်ကြသည်။
နှင့် 2551 ခုနှစ်ကျနော်တို့အပြာရောင်သစ်ပင် AMEX, Ltd. လုပ်ရပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများတည်ထောင်ခဲ့သည်။ high-quality ကမ္ဘာတဝှမ်းအမျိုးမျိုးသောရင်းမြစ်များမှ ပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းများ အုပ်စုမှ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို အဆိုပါထုတ်ကုန် နောက်တစ်နေ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး။
အတိတ်ကာလအတွင်းမှာတော့ ၏အုပ်စု ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အလားအလာအသိပညာတှေအမြားကွီး။ si သုတေသနကိုဦးဆောင်ထုတ်ဝေသုတေသနလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ, ကျွန်တော်တို့တကယ်အလယ်တန်းအာဟာရကိုသိစေသည်ရာ။ အပင်များအတွက်အာဟာရ, စာသား။
Bullazia Agrifluids Co,LTD
နံပါတ္ ၉၉၉ ရာခ်ာဖုလမ္း
ဖုန္း. 0-2432-6611-4, 0-2879-9844-5. ဖက္စ္. 0-2879-9843.